Nlereanya: YM320QE (G) -165Hz
Ihe ngosi QHD na-akwado nke ọma site na ngwa ngwa ngwa ngwa 144hz na-agba ume iji hụ na usoro na-agagharị ngwa ngwa na-egosi nke ọma na nkọwa zuru ezu, na-enye gị mgbakwunye ahụ mgbe egwu egwuregwu. Ma, ọ bụrụ na inwetara kaadi kaadị AMD dakọtara, mgbe ahụ ị nwere ike iji teknụzụ FreeSync wuru nke nyocha ahụ kpochapụ anya mmiri na nsị mgbe ị na-egwu egwu. Ga-enwe ike ijide marathons ọ bụla na-egwu abalị, ebe nyocha ahụ na-egosipụta ọnọdụ ihuenyo nke na-ebelata nsị ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ anya.
A na-akwado ihe ngosi FHD n'ụzọ doro anya site na mmụba ọsọ ọsọ 240hz dị oke egwu iji hụ na usoro na-agagharị agagharị na-apụta nke ọma na nkọwa zuru ezu, na-enye gị mgbakwunye agbakwunye mgbe ị na-egwu egwu. Ma, ọ bụrụ na inwetara kaadi kaadị AMD dakọtara, mgbe ahụ ị nwere ike iji teknụzụ FreeSync wuru nke nyocha ahụ kpochapụ anya mmiri na nsị mgbe ị na-egwu egwu. Ga-enwe ike ijide marathons ọ bụla na-egwu abalị, ebe nyocha ahụ na-egosipụta ọnọdụ ihuenyo nke na-ebelata nsị ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ anya.
Key Key 32 Key VA panel na 1920 × 1080 Full HD Resolution MPRT 1ms Nzaghachi Oge na 165Hz Refresh Rate Display Port + 2 * HDMI njikọ Ọ dịghị stuttering ma ọ bụ ịkwa ákwá na AMD FreeSync Technology Curvature R1800 R1500 FlickerFree na Low Blue Mode Technology Gịnị bụ ume ọnụego? Ihe mbu anyi kwesiri ikwuputa bu “Gini bu ezi ume? Ọ dabara nke ọma na ọ bụghị dị mgbagwoju anya. Ume ume bụ nanị ọnụọgụgụ oge ngosi gosipụtara ume ọhụrụ ọ ...
Nlereanya: YM320QE (G) -75Hz
Ihe ngosi QHD na-akwado nkwado nke 75hz na-enye ume ọhụrụ iji hụ na usoro ngwa ngwa na-apụta dị nro na nkọwa zuru ezu, na-enye gị ihe agbakwunyere mgbe ị na-egwu egwu. Ma, ọ bụrụ na inwetara kaadi kaadị AMD dakọtara, mgbe ahụ ị nwere ike iji teknụzụ FreeSync wuru nke nyocha ahụ kpochapụ anya mmiri na nsị mgbe ị na-egwu egwu. Ga-enwe ike ijide marathons ọ bụla na-egwu abalị, ebe nyocha ahụ na-egosipụta ọnọdụ ihuenyo nke na-ebelata nsị ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-enyere aka igbochi ike ọgwụgwụ anya.